Dongshang Nzvimbo Yekudyira Yejapan - Dhizaini magazini
Nzvimbo Yekudyira Yejapan
Nzvimbo Yekudyira Yejapan Dongshang iresitorendi yekuJapan uye bara iri muBeijing, inoumbwa ne bamboo mune dzakasiyana siyana uye hukuru. Iwo maonero epurojekiti aive ekugadzira nzvimbo yekudyira yakasarudzika nekudyidzana maesthetics echiJapan nezvinhu zvetsika dzechiChina. Iyo yechinyakare zvinhu zvine hukama hwakasimba nehunyanzvi uye hunyanzvi hwenyika mbiri idzi dzinofukidza madziro nedenga kuita kuti ive ambience yepamoyo. Iyo yakasikwa uye yakasarudzika zvinhu inomiririra inopesana neyemaguta-uzivi muChinese yemhando nyaya, iyo Nomwe Mahosi eiyo Bamboo Grove, uye iyo yemukati inomutsa manzwiro ekudyira mukati meiyo bambo grove.
Zita rechirongwa : Dongshang, Vagadziri zita : Yuichiro Imafuku, Izita remutengi : Imafuku Architects.
Nzvimbo Yekudyira Yejapan Yuichiro Imafuku Dongshang